ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ China Manufacturer
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး,အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး,ဇီဝလောင်စာဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာ
အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာသည့်ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာမိတ်ဆက်မတိုင်မီမိတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဘွိုင်လာ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဇီဝလောင်စာရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ, ဇီဝလောင်စာရေပူဘွိုင်လာ, ဇီဝလောင်စာပူပေါက်ကွဲမှုမီးဖို, ဇီဝလောင်စာအပူ conduction မီးဖိုနှင့်ဒေါင်လိုက်ဇီဝဗေဒသို့ကွဲပြားသောဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးဘွိုင်လာ, ထိုအလျားလိုက်ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာနဲ့ဒါပေါ်မှာ။
အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဆန်ခါ reciprocating ဇီဝလောင်စာလောင်စာလောင်ကျွမ်းများအတွက်အသင့်တော်ဆုံးလောင်ကျွမ်းခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါဘွိုင်လာ၏ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းမှာရိုးရာဘွိုင်လာမီးဖို၏အာကာသရိုးရာဘွိုင်လာမီးဖိုထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တစ်ဦးအလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နှစ်ခုလေတိုက်ဇီဝလောင်စာလောင်စာများ၏မီးလောင်ရာအတွက် precipitated မတည်ငြိမ်သောကိစ္စ၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုအပြည့်အဝလောင်ကျွမ်းခြင်းမှအကျိုးရှိသောတည်းဟူသောစီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အဆိုပါဘွိုင်လာစက်နှိုးအလိုအလျောက်နားလည်သဘောပေါက်ရန်လောင်စာဆီ (ဓာတ်ငွေ့) စက်နှိုး burner တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဘွိုင်လာနို့တိုက်ကျွေးရေး, လောင်ကျွမ်းခြင်း, slag ဖယ်ရှားရေး, ရေပေးဝေရေးနှင့်စက်နှိုးသည်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်နှင့်စစ်ဆင်ရေးအလွန်အဆင်ပြေသည်။ အဆိုပါဘွိုင်လာအချိန်အတွက်ဘွိုင်လာ၏အပူမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြာကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်ဘွိုင်လာ၏ထိရောက်သောနှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေးသေချာနိုင်သည့်အလိုအလျောက်ပြာသန့်ရှင်းရေးကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါဘွိုင်လာနောက်မှာ Economic တပ်ဆင်ထားသည်, လေထု preheater လည်းအသုံးပြုသူများကို '' လိုအပ်ချက်နှင့်အညီစီစဉ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အစဉ်အလာဘွိုင်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, ဘွိုင်လာကပိုထိရောက်နှင့်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့အပူချိန်အနိမ့်သည်။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည် insulator တွင်လည်းပစ္စည်းနှင့်တကွ, ဘွိုင်လာမျက်နှာပြင်အပူချိန်အနိမ့်သည် ဖြစ်. , အပူဆုံးရှုံးမှုကိုလစျြလြူရှုနိုင်ပါသည်။ တင်းကြပ်စွာတရုတ်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အစံချိန်စံညွှန်းများအရ, အားလုံးဖိအားအစိတ်အပိုင်းများကိုအရည်အသွေးမြင့်မားဘွိုင်လာသံမဏိလုပ်နေကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဘွိုင်လာရေဖိအားစမ်းသပ်မှုနှင့် X ကိုရောင်ခြည်စစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်စက်ရုံမထွက်ခွာမီတင်းကျပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ manholes, စစ်ဆေးမှုများတံခါးများနှင့်မီးတွင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏အကြီးမားဆုံးဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်: စွမ်းအင်ချွေတာရေး, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခနှင့်အသုံးပြုခြင်း။
ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာထိရောက်မှုထက်ပို 80%, ဘွိုင်လာအမျိုးအစား, လောင်ကျွမ်းခြင်းပိုပြီးအပြည့်အဝ, အဘွိုင်လာ၏ထိရောက်မှုလည်း ပို. မြင့်မားသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးကျောက်မီးသွေးပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ဘွိုင်လာ၏ပျမ်းမျှထိရောက်မှုအဆင့်ထက် 15% ပိုမိုမြင့်မားသောအရာ 88,3% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ထိရောက်မှုအလွန်မြင့်မားသော်လည်း, သူတို့သည်ဆဲပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေသည်ဟုဖုန်မှုန့်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်အဲဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာဖုန်မှုန့်စုဆောင်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ဖုန်မှုန့် remover သမိုင်းဝင်အခိုက်မှာပေါ်ထွန်း။
အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ကုသမှုဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီဘွိုင်လာ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ flue ဓာတ်ငွေ့ဆက်ဆံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘွိုင်လာအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အဆိုပါ flue ဓါတ်ငွေ့။ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသို့မြေမှုန့်ပိုက်ထဲကနေဖုန်မှုန့်, ဒီအခြိနျမှာမွမှေုနျ့၌ကြီးမားသောအမှုန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ centrifugal အင်အားသုံးခြင်းဖြင့်ကွဲကွာကြသည်, ထိုကြီးမားသောအမှုန်ဖုန်မှုန့်မုန်တိုင်းဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဆေးရုံကဆင်းသည်နှင့်ဒဏ်ငွေမှုန်မြေမှုန့်ဝင် အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း။ filter ကိုအိတ် filtering ကိုတော်အားဖြင့်, အထည်အိတ်၏မျက်နှာပြင်မှပူးတွဲမြေမှုန့်ပထမဦးဆုံးသွေးခုန်နှုန်းထိုးနှက်မှတဆင့်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဖုန်မှုန့်ပုံးတစ်ပုံးထဲမှာအာရုံစိုက်သည်, ပစ္စည်းများ၏ထိန်းချုပ်မှုပြန်လည်အသုံးပြုသို့မဟုတ်အသုံးပြုသည်။ အိတ် filter ကိုအပြီးပိုက်ကွန်ဓာတ်ငွေ့ပန်ကာကနေတဆင့်ခေါင်းတိုင်ကနေတဆင့်လေထုထဲသို့ဆင်းသည်။ အိတ် filter ကိုအားဖြင့် flue ဓာတ်ငွေ့များဖုန်မှုန့်များ၏ကုသမှုပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်ဖို့ဖုန်မှုန့်များ၏လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းတဲ့ထုတ်လုပ်မှုရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: အဆိုပါဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာ၏ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်ဘွိုင်လာအိတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , ဇီဝလောင်စာဖုန်ကောက်ခံရေး , ဇီဝလောင်စာဘွိုင်လာဖုန်ကောက်ခံရေး , ကျောက်များအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , ရောင်းမည်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောစွမ်းရည်ဆိုင်ကလုန်း Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး , HD ကိုအမျိုးအစားလူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး